Ukwenza iithoyi ezihlaziyiweyo. | Imisebenzi yezandla
Enye yezinto ezithandwa ngabantwana bethu zizonke ezo iigwegwe equlathe umculo. Ewe, akusoloko kufuneka ukuba yinto yokudlala enexabiso elinayo, masikhumbule ukuba ngamanye amaxesha ezona zinto zilula nezona zilula ukuzenza zezona zibathanda kakhulu abantwana bethu kwaye zisonwabisa abantwana bethu ngelixa izinto zokudlala ezithengiweyo zidlala kube kanye. bazilahla kwibhokisi yokudlala.
Kule meko singenza ifluti ngento elula njengeendiza, iindiza, iingcongolo okanye nantoni na esifuna ukuyibiza. Ziyathengiswa kuyo nayiphi na ivenkile. Uzakufuna kangangoko ufuna ifleyiti, oko kukuthi, ungayenza ngeendiza ezine okanye ezilishumi elinambini.
Ngaphandle kweendiza uya kuyidinga iteyiphu okanye iteyiphu. Enye inketho yiglue, kodwa ukuba ungakhetha iteyiphu ndiyayincoma kuba iya kuba ngcono ngakumbi, kulula ukuyenza kwaye ikhuseleke. Njengoko ubona nje sidinga izinto ezimbalwa kwaye ngoku masenze ifluti yethu!
Kulula njengokuthatha iindiza kwaye usike nganye imfutshane kancinci kunangaphambili, singasebenzisa irula ukuyilinganisa. Siza kuqhubeka nokusika iindiza de sibe nesandla sazo (njengoko besesitshilo ngaphambili, uninzi njengoko ufuna).
Emva kwexesha sibeka umaleko wekhasethi okanye iteyiphu, sibeke ngononophelo umququ kuyo, kwaye sisongele ngeteyipu ukuze incamathele. Yinto elula kwaye emnandi!
Iinkcukacha ezithe xaxe - Imisebenzi yezandla yabantwana: Ukuncamisa okuphaphazelayo
Ifoto - snsk24
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » Izinto zokudlala ezihlaziyiweyo: UMlingo woMlingo!
Yeyiphi imimangaliso yemanuwali, kuyathakazelisa ukufumanisa ubuninzi bezinto ezinokwenziwa njengezinto eziluncedo
Iresiphi yeglue eyenziwe ekhaya